ကိုလိုင်း drop သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်မရွေးဖုန်းခေါ်ပေးပါ, ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြလိမျ့မညျ! ကျွန်တော်တစ်ဦးသေးငယ်တဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ - ကျနော်တို့ကိုတုံ့ပြန်နေချိန်မှာသင်ကစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအောက်ကပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
SarcoidosisUK ဆက်သွယ်ဘို့သင့်အကြောင်းပြချက်ကို select ပေးပါ: SarcoidosisUK ဆက်သွယ်ဘို့သင့်အကြောင်းပြချက်ကို select ပေးပါ:ငါ SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှုနှင့်အတူဖုန်းခေါ်အချိန်စာရင်းချင်ငါ sarcoidosis သို့မဟုတ် SarcoidosisUK အကြောင်းယေဘုယျမေးခွန်းငါရန်ပုံငွေရှာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်များမီဒီယာမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များငါစုံစမ်းရေးအခြားအမျိုးအစားစာရင်းဝင်ကြပြီမဟုတ်ငါတိုင်ကြားချက်များ
မက်ဆေ့ခ်ျကို (ကြာကြာမက်ဆေ့ခ်ျများအဘို့, info@sarcoidosisuk.org ကိုသုံးပါ)
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်းများပုံမှန်အားဖြင့်ပွင့်လင်းကြသည် သောကြာနေ့, ညနေ6မှ 10am မှတနင်္လာနေ့.
0800 014 8821 (Freephone) ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့အတှကျအရန်ပုံငွေများကြီးပြင်းသို့မဟုတ်အသုဘအလှူငွေအပါအဝင်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှု, စေရန်ဆန္ဒရှိကြလျှင်, မှပေးပို့နိုင်ပါသည်: